Setsubun - खराब आत्माहरुलाई डराउन महोत्सव - जापान च्यानल गाइड
शनिबार, फेब्रुअरी,, २०२१
Setsubun (節 分) जापानको वसन्तको पूर्व संध्यामा जापानी महोत्सव हो।
नामको शाब्दिक अर्थ हो ofतुहरूको विभाजनजाडोलाई बिदाइ दिन र वसन्त (Risshun) को प्रवेश उत्सव मनाउने तरिका जुन फेब्रुअरीको शुरुमा मनाउँदछ, यो परम्परागत लोक कार्यक्रम हो जुन वसन्तको औपचारिक शुरुआत हो, जापानी चन्द्र पात्रो अनुसार।
यद्यपि यो एक होईन राष्ट्रिय बिदासेत्सुबन जापानभर व्यापक रूपमा मनाइन्छ र सबै जापानी बच्चाहरूको मनपर्ने लोक परम्परा मध्ये एक हो। एक दिन खेल्न र खानाहरू बीन्सलाई रोक्नको लागि र राम्रो भाग्यलाई स्वागत गर्दछ।
धेरै शताब्दीहरु को लागी, जापान को मान्छे वसन्त को शुरुवाती मा दुष्ट आत्माहरु को निष्कासन को उद्देश्य संग अनुष्ठानहरु प्रदर्शन गरीरहेको छ।
विगतमा, यस मिति सँगै गएको बर्षबाट दुष्टको शुद्धिकरणको लागि विस्तृत विशेष अनुष्ठान र अर्को वर्षमा रोग ल्याउन सक्ने राक्षसहरूलाई हटाउने साथ थियो। यो विशेष अनुष्ठान को रूप मा परिचित छ Mamemaki.
घरमा मामेमाकी प्रायः परिवारका कोहीद्वारा सञ्चालित हुन्छन् जसको चिनियाँ चिन्ह वर्तमान बर्ष अनुरूप छ, परिवारको शिर वा परिवारको शिर द्वारा।
परिवारहरू अगाडिको ढोकामा भुने गेडाहरू फ्याँक्न भेला हुन्छन्, र परिवारका एक सदस्य (प्राय: जसो बुबा) भूतको मुखौटा लगाउँछन् (ओनी) जब कि बच्चाहरूले ओनी वा सोटो गाउँछन्! फुकु वा उची! (डेविल्स बाहिर! राम्रो भाग्य!) सिमी फ्याँकदै।
त्यसपछि ममेमाकीलाई घरको वरिपरि र देशभरि मन्दिरहरू र मन्दिरहरूमा भुनाइएको गेडाहरू फ्याँकिन्छ। सिमी फ्याँक्दा, तपाई चिच्याउनु पर्छ ओनि वा सोटो! फुकु वा उची! (भूतहरू बाहिर, खुशी र भाग्य आउँछन्)। त्यस दिन बनेको अर्को अन्धविश्वास भनेको त्यो हो कि व्यक्तिले भुनेको दानाको मात्रा खान्छ जुन उमेर अनुरूप छ, त्यो हो, यदि व्यक्ति २ 25 बर्षको छ भने उसले २ 25 अन्न खानुपर्दछ (मामेमाकी पछि)। यो एक व्यक्तिमा भाग्य ल्याउनको लागि एक अन्धविश्वास हो। बच्चाहरू र वयस्कहरूले त्यस दिन धेरै रमाइलो गर्छन् र यो एकदम चाखलाग्दो छ किनकि यो जापानी संस्कृतिको धेरै लोक चाड हो।
सिमीका अतिरिक्त, व्यक्तिहरू भनिने विशेष सुशी खान्छन् एहोमाकी (भाग्यशाली सुशी)। एक लामो सुशी जुन कि एहो (खुशीको देवता) को दिशामा भाग्यको दिशामा हेर्दै खानुपर्दछ, सबै एहोमाकीलाई एकै ठाउँमा रोक्नुभयो र बोल्नुभएन ताकि तपाईं भाग्य काट्नुहुन्न। वर्षको एहोको दिशा यिन यांगले निर्णय गरेको छ र २०१ year मा हरेक वर्ष दक्षिण-दक्षिणपूर्व, २०१ 2013 मा पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, २०१० मा उत्तर-पूर्व र २०२० मा दक्षिण पश्चिमको रूपमा परिवर्तन हुन्छ।
सुशीलाई नोरी समुद्री समुद्री किनारमा घुमाउनुपर्नेछ र सात भाग्यशाली देवताहरूको सन्दर्भमा सातवटा सामग्रीले भर्नु पर्छ। तपाईं घरमा आफैं बनाउनुहुन्छ, (सामग्रीहरू ओबोरो डेन्बू (गुलाबी), ओमलेट वा डेटमाकी, काकडी, कन्पीयु, कूयाडोफु, अनागो वा उनागी र शितके हुन सक्छ)। वा तयार किन्नुहोस्, तपाईं Ehoumaki विज्ञापनहरू र उडानहरू यस मितिमा सुपरमार्केटहरू र सुविधा स्टोरहरूमा देख्नुहुनेछ। व्यक्तिले पूरै सुशी खानुपर्दछ, काट्नु हुँदैन किनभने काट्नुको अर्थ बिच्छेदन हो र यसैले तपाईं भाग्य काट्न सक्नुहुन्छ।
सबै परम्परागत चाडहरु जस्तै, सेट्सबुन देश भर मा मनाईन्छ।
सेत्सुबुनको परम्परा शताब्दी पछाडि फर्कन्छ, तर सिमी फ्याँक्ने परम्परा पहिलो पटक मुरोमाची काल (१1337-१ )1573)) मा देखा पर्‍यो। अन्नले जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र लाक्षणिक रूपमा घर शुद्ध पार्ने विश्वास गरिन्छ, दुर्भावना र स्वास्थ्य समस्याहरू ल्याउने खराब आत्मालाई रोक्दै। जापानी मानिसहरु शब्दहरु संग खेल्न मन पराउछ, सेम (mame) को उच्चारण को अर्थ राक्षसी आँखाहरु को लागी समान छ, त्यसैले बीन्स खेल्ने को लागी राक्षसहरु नष्ट गर्न को लागी एक जस्तै आवाज छ।
सेत्सुुनको उत्पत्ति चन्द्रमाको नयाँ सालमा चिनियाँ रीतिथिति र विश्वाससँग निकट जोडिएको छ, जब आत्मिक संसारले हाम्रो संसारसँग मिल्दछ, यसले हाम्रो आत्मालाई हाम्रो बाटोहरू पार गर्न दिन्छ र हाम्रो घरभित्र पस्दछ। यी आत्माहरू मध्ये केही एक परिवारमा बिरामी र दुर्भाग्य ल्याउन विश्वास गरिन्छ र नयाँ (चंद्र) वर्ष को शुरू हुनु अघि घर देखि शुद्ध गर्नु पर्छ।
टैग: संस्कृति, जापानी संस्कृति, एहोमाकी, भुटेको सिमी, खराब आत्माहरुलाई डराउन महोत्सव, जापान गाइड, जापान, Mamemaki, ओनि वा सोटो! फुकु वा उची!, Setsubun, भाग्यशाली सुशी, 分 分